I Filipina na amin’ ny anarany lava Repoblikan’ i Filipina, na amin’ ny fiteny tagalaogy Republika ng Pilipinas, na amin’ ny fiteny anglisy, Republic of the Philippines, dia firenena iray eo amin’ny tambanosy miisa nosy 7 107 ary manana velarantany 300 000 km² (90 %-n’ ny velarantan’ i Filipina ny nosy roa ambin’ ny folo lehibe indrindra). Nosy mahery ny roa arivo no misy mponina mipetraka ary 2 400 no isan’ ireo nosy tsy manana anarana. Any amin’ ny faritra andrefana amin’ ny Ranomasimbe Pasifika no misy an’ i Filipina. Ny firenena manodidina azy dia i Taiwan any avaratra, ny faritany atsinanan’ i Malaizia (Bôrneô), Brunei, ary Indônezia (Faritany Indônezianin’ i Bôrneô na Kalimantan).
Ireo faritany telon’i Filipina dia Luzón, Bisayas ary Mindanao. Ny nosin’ i Luzon no lehibe indrindra ary avaratra indrindran’ ny firenena, ary ao no misy ny renivohiny Manila ary ny tanàna lehibe indrindra Quezon City, misy mponina miisa 15 tapitrisa. Eo amin’ny faritany afovoan’ i Filipina no misy an’ i Visaya, ahitana ny nosy Negros, Cebu, Bohol, Panay, Masbate, Samar ary Leyte. Any atsimo no ahitana an’ i Mindanao, nosy faharoa amin’ ny velarantaniny. Davao, Marawi ary Zamboanga ary Cagayan no tanàna lehibe ao amin’ ny nosin’ i Mindanao. Any atsimo andrefan’ i Mindanao no ahitana ireo nosin’ i Sulu toa an' i Basila, Jolo ary Tawi Tawi; akaikin’ i Bôrneô no misy azy ireo ary ireo nosy ireo dia itoeran’ ny vondrona isilamista mpampihorohoro Abu Sayyaf. Any andrefan’ i Visaya no misy ny tamba-nosin’ i Palawan, misy nosy miisa 1 700.
1.1 Tany alohabe
1.3 Ny fahaleovan-tena
2.1 Pôlitika anatiny
2.2 Pôlitika ivelany
Ny fôsily dia nanaporofo fa olona maro no nipetraka tany Filipina nandritra ny an'arivony taona. Niampita ny tany sy ny ranomandry teo aloha ny Negritô mba hipetraka ao amin' ny nosy. Vondron' olona aostrônezianina maro no tonga tany Filipina nandritra ny arivo taona voalohany, nanosika ny mponina teratany ho any anatiny, ary angamba nanangona azy ireo tamin' ny alalan' ny fanambadiana.
Tonga tamin' ny taonjato faha-8 ireo mpivarotra sinoa. Ny fitomboan' ny fanjakana bodista dia nahavita ny varotra tamin' ny vondronosy Indôneziana, India, Japana ary Azia Atsimo-Atsinanana. Nanamafy ny herin' izy ireo ny ady nifanaovan' ny fanjakana tany Azia Atsimo-Atsinanana. Mandritra izany fotoana izany, ny fielezan' ny finoana silamo tamin' ny alalan' ny varotra sy ny fampielezam-pinoana, sahala amin' ny kristianisma, izay nentin' ny mpivarotra sy misiônera tany amin' iny faritra iny; ny Arabo dia tonga tao Mindanao tamin'ny taonjato faha-14. Rehefa tonga ny Eorôpeana voalohany, izay notarihan' i Ferdinand Magellan tamin' ny taona 1521, dia nisy rajah tany avaratr' i Manila, izay niankina ara-pahefana tamin' ny fanjakana atsinanan' i Azia. Na izany aza dia nizaka tena ireo nosy ireo
Nanomboka tamin’ ny fahatongavan’ ny olona tamin’ ny alalan’ ny tany ny tantaran’ i Filipina. Ny Eorôpeana voalohany indrindra tonga tany Filipina dia i Ferdinand de Magellan tao amin’ ny nosin’ i Homonhon, any atsimo andrefan’ i Samar, ny 16 Martsa 1521. Talohan’ ny nahatongavan’ i Magella, maro ireo Fanjakana nisy tao Filipina, ohatra amin' izany ilay fanjakana Bodistan’ i Butuan, ny fanjakan’ i Tondo ary Maysapan, fanjakana natanjaka sy nanan-karena nanomboka tamin’ ny taonjato faha-10, na ny soltanata mozilmanan’ i Sulu, Mainila, Magindanao ary Lanao. Nifandray tamin’ i Sina, India, Japana, Tailandy, Vietnamy ary Javà ireo fanjakana ireo, fa tsy misy fanjakana tena nanam-pianjadiana manerana an’ i Filipina.
Nanomboka tamin’ ny taona 1565 ny tambanosin’ i Filipina no zana-tany espaniôla, tamin’ ny nahatongavan’ i Miguel Lopez de Legazpi, nanorina ny tanànan’ i San Miguel izy teo amin’ ny nosin’ i Cebu. Tamin’ io fotoana io no nanorenana ny tanànan’ i Manila eo amin’ ny nosin’ i Luzon. Haharitra telonjato taona ny fanjanahan-tanin’ ny espaniôla ao Filipina. Nandritra izay fe-potoana nanjanahany an’ i Filipina izay, dia nitondra zava-maro avy any Andrefana ny Espaniôla miaraka amin’ ny haifomba tandrefana (kristianisma, fanontana printy, taratasy, kalandrie...). Tsy zanatany mitokana i Filipina tamin’ izany fotoana izany fa faritra iray ao amin’ ny zanatanin’ i Espaina Vao (Nueva España) manana ny tanànan’ i Mexico ho renivohitra. Nafindra tany Madrid ny renivohitra taorian’ ny fahaleovantenan’ i Meksika nanomboka tamin’ ny toana 1821. Nanjanaka an’ i Filipina koa ny Britanika tamin’ ny 1762 ary 1764. Nandritra ny fanjanahantany espaniôla, maro ireo tanàna voaorina, ary naorina miaraka amin’ izany koa ny foto-drafitr’asa. Namadika ireo tera-tany ho kristianina ireo misiônera espaniôla ary nanorina fianarana, oniversite ary hôpitaly manerana ny tamba-nosy Filipina.
Nanomboka tamin’ ny volana Aprily ny taona 1896 ny tolom-piavotana filipina hialana amin’ i Espaina, ary nifarana roa taona tety aoriana tamin’ ny fanambarana ny fahaleovantena ary ny Repoblikan’ i Filipina Voalohany. Ny fifaneken’ i Paris nosoniavina tamin’ ny 1898 namarana ny ady filipina-espaniôla anefa dia nanome an’ i Etazonia ny fahefan’ i Filipina. Tsy neken’ i Filipina izay fifanekena izay ary nanambara ny hiady amin’ i Etazonia i Filipina tamin’ ny 2 Jiona 1899. Ny filoham-pirenena tamin’ izany fotoana izany Emilio Aguinaldo, dia voasambotry ny Amerikana tamin’ ny 1901 ary nifarana herintaona taoriana ny ady. Niaiky ny fandresen’ ny Amerikana ny manam-pahefana filipina, nefa nitohy hatramin’ ny taona 1935 ny ady. Tena nanomboka tamin’ ny 1905 ny fitondran’ i Amerikana an’ i Filipina. Nanomboka naitatra ny fizakan-tenan’ i Filipina tamin’ ny 1935 mba hitondra any amin’ ny fahaleovantena natao ho amin’ ny 1946. Voatery najanona ilay fizakan-tenan’ i Filipina noho ny Ady Lehibe Faharoa. Rehefa tapitra ny Ady Lehibe Faharoa dia nahaleotena i Filipina.
Ny governemanta filipina, dia mitovy amin' ny governemantan' i Etazonia. Ny filoham-pirenen' i Filipina dia miasa amin' ny maha-filoham-panjakana, lehiben' ny governemanta ary komandy ho an' ny miaramila ao Filipina sy ny tafika. Ny filoha dia voafidy amin' ny alalan' ny fifidianana toy ny any Amerika ihany afa-tsy amin' ny latsa-bato malaza satria tsy misy ny fifidianana. Mijanona ho filoha mandritra ny 6 taona. Izy no mpitarika ny kabinetra.
Ny sampana mpanao lalàna filipina dia roa efitra, ny Kôngresin' i Filipina, dia misy ny Antenimieran-doholon' i Filipina sy ny Antenimieram-pirenen' i Filipiana; ny mpikambana ao aminy dia voafidim-bahoaka. Misy loholona 24 miasa mandritra ny 6 taona ao amin' ny Antenimieran-doholona fa ny Antenimieram-pirenena dia tsy mihoatra ny 250 ny kôngresista izay samy manana fe-potoana 3 taona.
Ny sampan' ny fitsarana ao amin' ny governemanta dia tarihin' ny Fitsarana Tampony any Filipina, izay manana ny Lehiben' ny mpitsara ho lohany sy mpitsara mpiara-miasa 14, izay voatendrin' ny filoham-pirenena avokoa.
I Filipina dia mpikambana mpanorina ao amin' ny Fikambanan' ny Firenena ao Azia Atsimo-Andrefana (ASEAN, Association of the Nations South Asian Nations) sady mpandray anjara mavitrika amin' ny fiaraha-miasa ara-toekarena any Azia-Pasifika (APEC) ihany koa, mpikambana ao amin' ny Vondron' ny 24 ary iray amin' ireo firenena 51 nanorina ny Firenena Mikambana tamin' ny 24 Oktobra 1945.
Ny firenen’ i Filipina dia tamba-nosy iray miisa nosy 7 107 (1 000 amin’ ireo no misy olona mipetraka) manana velarantany manontolo 300 000 km². 800 km miala ny kaontinanta aziatika no misy an’ i Filipina, eo anelanelan’ ny nosy Bôrneô sy Taiwan.
Noho ny fisian’ i Filipina eo amin’ ny Fehin’ afon’ i Pasifika, maro dia maro ireo afotroa mbola velona ao Filipina ary matetitetika ireo horohorontany.
I Filipina dia firenena andalam-pandrosoana. Tamin' ny taona 1998, ny toekarena Filipina -- izay manafangaro fambolena sy ny indostria maivana ary ny tolotra fanohanana -- dia niharatsy vokatry ny krizy ara-bola aziatika sy ny fiovan' ny toetany. Ny fitomboan' ny toekarena dia 0,6 % tamin' ny taona 1998 avy amin' ny 5 % tamin' ny taona 1997, saingy tafaverina hatramin' ny 3 % tamin' ny taona 1999 ary 4 % tamin' ny taona 2000. Tamin' ny taona 2012, dia 6,6 % izany.
Nampanantena ny governemanta fa hanohy ny fanavaozana ara-toekarena hanampiana an' i Filipina hanaraka ny dingana fampandrosoana any amin' ireo firenena vao misondrotra any Azia Atsimo-Atsinanana. Ny paikady dia manatsara ny fotodrafitrasa, manamboatra rafity ny hetra ho fanampiana ny fidiram-bolan' ny governemanta, fanohanana ny orinasa tsy miankina amin' ny governemanta sy ny fampindramam-bola ho an' ny toe-karena ary ny fitomboan' ny varotra ao amin' ny faritra. Ny hoavy ara-toekareny dia miankina amin' ireto firenen-dehibe telo ireto: Sina sy Etazonia ary Japana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Filipina&oldid=1040740"